ချစ်သူ.. မလိုက်ချင်လည်း နေရစ်ပါတော့
ငါ့မှာ ပါမလာဘူးလို့ဘဲ မှတ်ယူလိုက်ပါ့မယ်.။
အရာအားလုံးကို မင်းအလိုကျ ဖြစ်စေရင်း
မင်းအတွက်တော့ ငါဟာ အရံလူတစ်ယောက်ပဲပေါ့.။
စာရေးသူ ...မေပျို at 7:55 AM 12 comments
While the life clock starts to go,
with blissful cry to earth, reach our soul.
Seconds and minutes we pass through,
with joy and happiness in our youth.
As the time goes we don't know,
beaman seems meaningful.
Ticks and ticks our life clock runs,
we don't realize our time little left.
Months and years don't wait for us,
to the old man we become.
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ သဘောကျလို့ အားလုံးဖတ်ရအောင် ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ ...မေပျို at 7:27 AM0comments
စာရေးသူ ...မေပျို at 8:43 PM4comments